Serivisy - Shenzhen Lantaisi Technology Co., Ltd.
Afaka manome serivisy OEM ho an'ny mpanjifanay izahay. Hatramin'izao, nanao famokarana faobe ho an'ny karazana vokatra 20 mahery, izay natao manokana ho an'ny tsena. Raha tianao ny modely ary afaka manafatra ny faran'izay kely indrindra, dia afaka manao OEM fiaraha-miasa. Izahay dia hanonta ny LOGO voatondro amin'ny vokatra, ny fonosana ary ny boky fampianarana, sns.
Manana fahaiza-manao R&D sy famolavolana tsy miankina izahay, ary afaka mamolavola modely vokatra samihafa. Raha manana ny hevitrao manokana momba ny endriky ny vokatra ianao dia afaka manova ny endriny na ny firafitry ny vokatra. Manana fahafahana mamolavola vokatra tsy manam-paharoa araka ny fepetra takian'ny mpanjifa izahay mba hiantohana ny fanavahana ny vokatra sy ny fivarotana tokana. Amin'izao fotoana izao, marika lehibe sy fanta-daza maro no nanao ODM fiaraha-miasa taminay, ary ny R & D sy ny fahaiza-manao dia nankatoavin'ny mpanjifa.
Tongasoa mpanjifa bebe kokoa hiara-miasa aminay amin'ny serivisy ODM.
Fibaikoana fonosana tsy miandany
Izahay koa dia mandray commande ho an'ny fonosana neutre kely. Raha vao manomboka mivarotra vokatra charger tsy misy tariby ianao na sambany vao manomboka miara-miasa aminay. Mety mila baiko andrana misy singa zato na roa na telonjato ianao. Ho setrin'izany fitakiana izany, dia manoro hevitra anao izahay mba hanao baiko kely miaraka amin'ny fonosana tsy miandany, tsy manonta ny LOGO amin'ny vokatra sy ny fonosana, ary tsy misy endrika manokana ho an'ny fonosana.
Ka raha ao anatin'izany toe-javatra izany ianao dia raisina an-tanan-droa hiara-miasa aminay amin'ny baiko fonosana tsy miandany. Hanome anao ny vokatra mendrika indrindra izahay.
Raha manana ny orinasa akorandriaka na orinasa akorandriaka miara-miasa, fa mila anay hanome PCBA anatiny. Afaka manome PCBA mitokana ho anao izahay. Azonao atao ny mivory ary farany mitsapa ny vokatra ao amin'ny orinasa akorandriaka. Ny PCBA dia novolavolain'ny injeniera, ary manana zo tsy miankina amin'ny fananana ara-tsaina sy fampisehoana matotra. PCBA an'hetsiny no nalefa ho an'ny mpanjifa amin'izao fotoana izao.
Tongasoa eto amin'ny fiaraha-miasa amin'ny PCBA miaraka aminay, hanome anao ny PCBA azo antoka sy azo antoka indrindra izahay, misaotra anao.